Ibta naaska hadii sidaan loo qaniino si xanta xanteyn ah waxey ka daran tahay kintirka ha aqrin hadaad kacsi dhawdahay | HEEGAN
Ibta naaska hadii sidaan loo qaniino si xanta xanteyn ah waxey ka daran tahay kintirka ha aqrin hadaad kacsi dhawdahay
Aqriso : Bisha Malabka iyo Marti galinta raaxada galmada Ka dib waxaa ninka laga rabaa in uu ka salaaxo oo uu ka kiciyo calaancasha labada lug waxa aadna ka soo bilaabeysa jilibka korkiisa illaa aad ka soo gaarto mantiqada xubinta taranka . Mar waliba oo aad u dhawaato salaaxida xubinta gabarta waxaa sii xoogeysanaya arinta loo yaqaan Ciqaabta Loo Baahan Yahay balse ka digtoonaaw markaan in aad taabato xubinta , ku cel cel istiinka salaaxida calaancasha labada cagood adiga oo si tartiib u xanta­xanteynaya oo shuminaya , ogaaw haweenka aad ayay u jecel yihiin in laga dhunkado qeyb waliba oo jirkooda ka mid ah .
Sidoo kale mantiqada ka sareeya xubinta taranka ee ay tinta ku daboolan tahay (meesha tininta bisiqda ka soo baxdo) oo ay ku jiraan qadar baruur ahiyo sidoo kale xididada kacsiga aad ayay uga helaan haweenka oo kacsi xadkiisa ka baxay ayay ka helaan . cicineimanmarcus6 Cilmi ahaan mantiqadas waxaa loo yaqaan Goobta Buurta oo xooga baroor ayaa saaran waxaana lagu kiciyaa taabasho adiga oo faraha adeegsanaya adiga oo ka bilaabaya qeybta sare una leexanaya dhanka Kintirka balse ma taabaneysid , waxana ninka markaan laga doonaya in uu adeegsado habka loo yaqaan Ciqaabta Loo Baahan Yahay .
Haweenka qaarkood waxa ay jecel yihiin in kintirka laga kiciyo kor iyo hoos , qaarkoodna dhanka midig ee kintirka waana meesha uga kacsiga badan . Sidaa darteed waxaa ninka la gudboon in lamaantiisa uu weydiiyo waxa ay doorbideyso gabartana waa in saaxibkeeda u sheegto iyada oo aan ka xishoon ,ogaaw ragga jaceyl waali ah ayay u soo qaadaan haweeneyda aan raaxada kala xishoon. Marka ay dhacaan baashaal ciyaareedkaas ayna haweeneyda u bislaatay weerarka ayaa haboon in ninka ku soo salaamo malabyarowgiisa xubinta ,waxa ayna haweeneyda sidaas loo sameeyo ay heleysaa gariirka galmada.